မန္တလေး | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး အလုပ်အကိုင်များစာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူ‌ရေးအလုပ်အကိုင်များစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များဆော့ဗ်ဝဲ နှင့် အချက်အလက် ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များဆေးဝါး နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ အလုပ်အကိုင်များထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးမှုပိုင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များယာဉ်မောင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န််််ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များလူမှုရေးနှင့် လုပ်အားပေး အလုပ်အကိုင်များလူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များသုတေသန၊ သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်အကိုင်များအကြံပေး နှင့် နည်းဗျုဟာပေး အလုပ်အကိုင်များအင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များအစားသောက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များအဆောက်အဦးပိုင်း နှင့် ဗိသုကာ အလုပ်အကိုင်များအရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များအုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံးကြော်ငြာ ၊ မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်းမော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်းဘဏ် ၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း နှင့် အာမခံလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပညာရေးလုပ်ငန်းစွမ်းအင်လုပ်ငန်းဖျော်ဖြေရေး၊ ပွဲအခမ်းအနားများနှင့် အားကစား လုပ်ငန်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းဟိုတယ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်းသတ္တုတူးဖော်ရေး ၊စွမ်းအင် နှင့် သတ္တု ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေး လုပ်ငန်းလက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တည်နေရာအားလုံးမန္တလေးရန်ကုန်မြန်မာပြည်အတွင်းနိုင်ငံခြားအလုပ်နေရာမရွေး (အိမ်မှာလုပ်ရန်)
Result page 1 for မန္တလေး ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ
Provide guidance, support, and services for logistics activities relating to the KMTL Warehouse team. Responsible for making sure products reach their destinations safely, securely, and on time. Liaise with KMTL internal teams in charge of Warehouse transportation activities. Prepare and submit reports and plans as required.
မန္တလေး အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 1,000,000 - 1,500,000
ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ 4
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း 1 မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း 1 ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း 1 သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း 1
Expats Preferred 1